खतरा बढेपछि पुनः नियम परिबर्तन गर्दै प्रशानन, अब सवारीसाधनलाइ पास नदिने, लकडाउनलाइ थप कडा बनाउदै ! – Khabar Silo
दोहा – हिमालय एयरलाइन्सले अगष्ट ३१ तारिखमा कतारबाट नेपाल फर्किने उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ । साथै यसअघि टिकट लिएका र दूतावासको सूचीमा परेकाहरुले पुनः प्रमाणित गर्नका लागि सम्बन्धित एयरलाइन्समा सम्पर्क गर्न कतारस्थित नेपाली दूतावासले अनुरोध गरेको छ । स्वदेश फर्कनेलाई कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को पीसीआर परीक्षण कतार सरकारबाट अनुमति प्राप्त विभिन्न निजी अस्पतालमा […]
Posted on January 27, 2021 Author khabar silo
काठमाण्डौ । यो संसारमा आमा भन्ने एउटा यस्तो शब्द हो जस्ले बाबुको तुलनामा आफ्ना सन्तानकोलागी धेरै योगदान दिएकी हुन्छिन् । र जिम्मेवारी बाबुको तुलनामा असल तरिकाले निभाई रहेकी हुन्छिन् । आफु भोकै भएर पनि आफ्नो सन्तानलाई पेटभरी खाना खुवाएकै हुन्छिन् । आफु नां’गो भएरै पनि आफ्ना सन्तानको शरीर छोपेकै हुन्छिन् । त्यसैले त उनी आमा […]
काठमाडौं – दर्शनार्थीका लागि पशुपतिनाथको मन्दिर खुला गर्ने तयारी गरिएको छ । साउन ७ सम्मको बन्दाबन्दी अवधि सकिएलगत्तै मन्दिर खुला गर्ने तयारी गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले जानकारी दिए । “मन्दिर खुला गरिए पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट बच्न आवश्यक ठानिएका सबै पालना गर्दै गराउँदै मन्दिर खुला हुन्छ”, उनी भन्छन् । महादेवको […]